I-E-4C1 ○ Umbhede ungahanjiswa kahle lapho isinqamuleli esikwazi ukuphakama silinganiswe nobubanzi obulinganayo futhi singakhiya ngokuzenzakalelayo lapho islayida ngokuphelele kunoma iyiphi i-torger efakwe kudivayisi yokuphepha. Cast I-castor castor iqinisekisa ukuthi i-welter iya phambili iqonde. Zombili lezi zingxenyekazi zesikhulumi nezinsimbi eziseceleni zenziwe ngezinto ze-HDPE ezakheke ngokuphelele. ○ I-Backrest ilawulwa isiphethu igesi esizayo se-hydraulic. Ment Ukulungiswa kobude kusetshenziswa nge-crank. Cast Dia.150mm ama-castors aphakathi nendawo l ...
Isikebhe sokuhamba ngezinyawo
I-E-3C1 ○ Womabili amapulatifomu kanye namajantshi asemaceleni enziwe ngezinto ezenziwe nge-HDPE okwenziwe konke. I-Backrest ilawulwa yi-hydraulic auxilialy entwasahlobo. I-Backrest ilawulwa yi-hydraulic auxilialy entwasahlobo. Cast Ф150mm ama-castors ayi-central locking system. Cast Ф150mm ama-castors ayi-central locking system.
I-E-8 A1 ○ Ipulatifomu eyinhloko yesandla esinezinhlelo zokusebenza zamaphampu we-hydraulic ezingeniswe ngaphakathi zenziwe ngezinto eziveziwe ze-X-ray. ○ Uhlelo lokukhiya oluphakathi nendawo kanye ne-castor castering kwenza i-welter iqhubeke ngokuqinile, ithembekile futhi ilula. ○ Isipikili sinemisebenzi ye-hi-low, iTrendelenburg kanye ne-Trendelenburg ebuye ilawulwe yizisekelo ezisezinhlangothini zombili zesilenge. ○ Ingemuva le-welter linezisekelo zokuvala izisekelo, isembozo esingezansi ...
Ukulungiswa kwe-E-8 A2-standard Confuction 1.Central brake system: Kuhlotshiswe izisekelo ezine zokubopha ezinhlangothini zombili zombhede kwenza amabhuleki asesimweni esifanele kahle nangokuvumelanayo) .Usebenzisa abaxhumi abangenisiwe abanezimpawu ezisezingeni eliphezulu kwenza amabhuleki atholakale kalula nokuphila isikhathi eside. Ukuxhaswa kwensimbi yokusebenza kwe-2.Multi: Ukusekelwa kwensimbi kungabeka ukuqapha futhi kungasetjenziswa njengekhanda lokuvikela ukuvimbela isiguli ngengozi. I-3.Push Handle: Yehlisa umthwalo wokusebenza kanye nemikhawulo ...
Ukulungiswa kwe-E-8 A3-standard 1. Uhlelo lwamabhuleki aphakathi nendawo: Okufakelwe izisekelo ezine zokubopha ezinhlangothini zombili zombhede kwenza amabhuleki asesimweni esikahle kahle nangendlela efanele.Usebenzisa abaxhumi abangenisiwe abanezinhlaka ezisezingeni eliphakeme zenza amabhuleki atholakale kalula isikhathi sokuphila isikhathi eside. Ukuxhaswa kwensimbi yokusebenza kwe-2.Multi: Ukusekelwa kwensimbi kungabeka ukuqapha futhi kungasetjenziswa njengekhanda lokuvikela ukuvimbela isiguli ngengozi. I-3.Push Handle: Yehlisa umthwalo futhi uvimbele ...